Gịnị bụ dayameta nke ụwa? | Network Meteorology
Gịnị bụ dayameta nke ụwa?
Mmadu na-achosi ike site na mmalite nke oge. Chọta aha na aha nna maka ihe niile dị n'ụwa abụwo ihe kacha mkpa. Ha abụọ mara nha nke ihe niile ma kpọọ ihe aha ha. Anyị na-atụ, na-atụle ma na-atụle ihe niile iji mata kpọmkwem ihe anyị na-eme. Ọ ga-obere na mbara ala anyị. Ọ bụ ezie na ụwa enweghị ike ịma ozugbo, ọ ga-ekwe omume ịkọwa dayameta ya.
You chọrọ ịma ihe bụ dayameta nke ụwa oleekwa otú e si gbakọọ ya? Lee, anyị na-agwa gị ihe niile.
1 Tụọ na labeelu
2 Eratosthenes, onye nyocha izizi nke dayameta nke ụwa
3 Rakpụrụ Eratosthenes
4 Esịtidem dayameta
Tụọ na labeelu
Planetwa anyị ka nwere ọtụtụ ebe ọ na-amaghị ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịlele mgbanwe niile n'akụkụ ya niile. Dịka ọmụmaatụ, mmiri kachasị omimi nke dị, ọ nwere ike ọ kabeghị aka iru teknụzụ anyị. Ebe ọ bụ na oke ọkụ nke anyanwụ na-ebelata n'okpuru oké osimiri na nrụgide nke mmiri na-ebibi ihe niile achọtara, anyị amatachaghị ala ala nke nnukwu olulu mmiri kachasị n'ụwa.
Otu na-aga maka dayameta nke Earthwa. Anyị enweghị ike igwu na igwu ruo mgbe anyị kụrụ isi ụwa. Nke mbụ, n'ihi na akwa okwute na-ebu oke ma sie ike maka teknụzụ anyị. Nke abuo, n'ihi na okpomọkụ nke dị n'ime Ọ na-efegharị gburugburu 5000 Celsius ma ọ nweghị mmadụ ma ọ bụ igwe nwere ike iguzogide ụdị okpomọkụ ahụ. N'ikpeazụ, na omimi ndị a enweghị ikuku oxygen iku ume.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịlele dayameta nke ụwa ozugbo, enwere ọtụtụ ụzọ na-enyere aka ịkọ ya. Iji maa atụ, anyị nwere ike iji ebili mmiri na-amịpụta ihe banyere ihe mejupụtara ya n'ime ime ụwa. N'ihi usoro ọmụmụ na-enweghị isi nke ụwa anyị, anyị nwere ike ịmụtakwu banyere ya na-enweghị iji anya anyị hụ ha.
Ozizi efere tectonics ọ na-agwa anyị na e kere eke jikọrọ kọntinent n'ime efere tectonic nakwa na ha na-aga n'ihu site na mmiri iyi na-efegharị na uwe ụwa. A na-enye mmiri dị ugbu a site na njupụta dị n'etiti ihe dị n'ime ụwa. Anyị nwere ike ịmata ihe niile a site na ụzọ ntụgharị ntụgharị.
Eratosthenes, onye nyocha izizi nke dayameta nke ụwa
Ebe ọ bụ na mmadụ na-achọkarị ịmata ihe, ọ gbalịrị ịchọta ụzọ maka ihe niile. Eratosthenes bụ onye mbụ nwere ike ịlele dayameta nke ụwa. Ihe nke bu ihe enigma nye ndi biri n'oge ochie.
Hezọ o si tụọ ụwa nwere ụfọdụ ihe ndị siri ike, n'oge ahụ, a na-ahụta teknụzụ mgbanwe. Otu a ka ọ dịkwa maka kaseti ahụ. Ruo n'oge na-adịbeghị anya teepu VHS bụ teknụzụ kachasị ọhụrụ. Ugbu a, anyị nwere ike itinye ihe karịrị 128GB na ngwaọrụ nke akụkụ ya anaghị agafe nha nke ntu nke mkpịsị ụkwụ ukwu.
Otu n’ime ihe ndị kachasị mkpa o jiri tụọ dayameta nke ụwa tụrụ atụ site n’ụbọchị Oge Ezumike. Eratosthenes wepụtara akwụkwọ papaịrọs site n’ọ́bá akwụkwọ mgbe ọ chọpụtara na ọkwa na-egosi onyinyo ọ bụla na Siena. Nke a bụ n'ihi na ụzarị anyanwụ rutere n'elu ụwa n'ụzọ dabara n'akụkụ. Nke a bụ otú e si kpalie ọchịchọ ịmata ihe na ọ chọrọ ịmata otú dayameta ụwa dị.
Mgbe e mesịrị, ọ gara Alexandria, ebe m ga-emeghachi nnwale ahụ wee hụ na onyinyo ahụ dị ogo 7. Mgbe ọ nwụsịrị, ọ ghọtara na ọdịiche dị na ndò ahụ nke o ji tụọ na Siena bụ ihe kpatara iji mata na ụwa gbara gburugburu ma ghara ịdị larịị dị ka ekwenyere.
Site na ahụmịhe ndị ọ nwetara na nha abụọ ahụ, ọ malitere ịmepụta echiche ole na ole ga-enyere aka ịlele dayameta ụwa. Iji mee nke a, ọ malitere ịchọpụta na, ọ bụrụ na okirikiri nwere ogo 360, nke iri ise nke gburugburu ahụ ga-abụ ogo asaa, nke ahu bu, dika onyinyo ahu turu na Alexandria. N’ịmara na ụzọ dị n’etiti obodo abụọ ahụ bụ narị kilomita asatọ, ọ chọpụtara na ihe ga-eme n’ụwa bụ ihe dị ka puku kilomita iri anọ.
Ugbu a ọ maara na dayameta nke ụwa dị ihe dịka 39.830 km. Iji mee ka ọ dị n'oge ochie na-enweghị atụ ọ bụla, o mere ụfọdụ nha anya ziri ezi. Ya mere, anyi aghaghi ichota oke oru o mere. Anyị ga-ekwukwa banyere mkpa trigonometry dị, n'ihi na ekele ya, ọ nwere ike ịmata dayameta nke ụwa.
Ihe Eratosthenes turu na-atụ aka na dayameta nke ụwa gburugburu. Agbanyeghị, enwere ndị chọkwara ịma ihe ntanetị dị n'ime ụwa. Ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịga ozugbo na etiti nke ụwa maka ndị ahụ e kwuru n'elu, a ga-adọta ihe akaebe na-enweghị isi.
Dịka ọmụmaatụ, enwere oke ebili mmiri na-enye ohere, na-amata ọdịiche dị n'etiti ha, a na-eji ụdị ihe ahụ emee ime ahụ na anya nke ọ dị. Nke a bụ otu anyị si mara na mputa nke uwe mgbokwasị nwere ihe ndị na-adịchaghị egwu nke na-agwakọta ya na nke nke ịdị elu dị elu iji mepụta mmiri iyi nke na-ebu maka mbugharị nke tectonic plate.
Site na usoro ndị a na-enweghị isi ọ nwere ike ịmata na dayameta site na ụwa ruo n'akụkụ nke ọzọ, na-agafe na isi, dị kilomita 12.756. Dika mmasi, ihe omimi di omimi nke mmadu mebere kariri 15 km. Ọ dị ka a ga-asị na ọ bụ nke apụl nke anyị chọrọ iru ọkpụkpụ nke ime ahụ, naanị anyị dọwara obere mkpa nke kpuchiri ya, ya bụ, akpụkpọ ahụ ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ndị mgbakọ na mwepụ nwere ọgụgụ isi ma nwee ọgụgụ isi bụ ndị nwegoro ike iji ezigbo teknụzụ mee ezigbo nchọpụta. N'ihi na teknụzụ bụ naanị ihe na-eme ka ihe ọmụma dị mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Gịnị bụ dayameta nke ụwa?
Juanjo Castro onye nhazi ihe oyiyi dijo
Eratosthenes atụghị dayameta nke ụwa 40000 km, n'ọnọdụ ọ bụla ọ ga-abụ perimeta. N'iso echiche ya, okirikiri ahụ bụ 6336 kilomita. Ọbụna obere njehie karịa nke a kpọtụrụ aha n'isiokwu ahụ. Ma obu na odi nkpa ka edere gi nke oma, ma obu ikwesiri inyocha ihe edere. N'ọnọdụ ọ bụla, ntakịrị rigor.
Zaghachi Juanjo Castro
N’iburu n’uche na anyị amachaghị banyere oke akụkụ ụwa, ekele maka ozi gị, enwere m olile anya na ka ọmụmụ gbasara nke a na-aga n’ihu, anyị ga-amụtakwu banyere isiokwu a, nke bụ ihe na-atọ ụtọ.
Zaghachi Edmundo Uribe
Site ebe m na-eguzo ma ọ bụ kama ịnọdụ ala, ruo n'akụkụ nke ọzọ m na-eje ije (ụgbọ ala, abion, ụgbọ mmiri) kpọmkwem site na INNER nke ụwa ruo ebe m ọzọ nọ, onye nọkwa na tebụl na 12.756 kilomita dị anya? Ee, ma site kwa n'otu ebe edere m na mbụ na ụzọ nke ụwa na 6.378 km na site ebe ahụ gaa ebe onye ọzọ m nọ na ọzọ 6.378 km, nke gbakwunyere estremos (site n'okporo ụzọ ruo n'ikpere mmiri), ha nye a anya nke 12.756 km? ee
Ọ bụghị na anya nke bọọlụ, nke okirikiri ma ọ bụ nke ụwa DANDOLE LA BUELTA na-azọ ụkwụ n’elu ụwa na mmiri, site na tebụl m ruo mgbe m ga-erute oche m ọzọ? mba
Zaghachi huber nelson meneses ruiz
Edemede dị mma, mana ị na-agbagwoju anya na gburugburu, dayameta bụ ihe okirikiri ma ọ bụ okirikiri site n'akụkụ ruo n'akụkụ gafere n'etiti, na gburugburu ga-amalite site n'otu isi wee gawa n'ụzọ niile, bụ ihe m ghọtara
Segha, eratosthenes ekwughi na gburugburu ụwa dị kilomita 40000, ọ sịrị, kama ọ gbakọọ ma rụpụta ezigbo ọnụ ọgụgụ maka oge ahụ nke bụ 39.375 km. Na kpom kwem bụ 7.2 Celsius, nke mgbe ọ bayere 50 na-enye 360 ​​Celsius dị ka nsonaazụ na nke ahụ bụ etu e si gbakọọ gburugburu nke ụwa ma ọ bụrụ na ọ jiri oge ọkọchị na obodo Egypt abụọ, Syene na Alexandria, na-enye ebe dị anya n'etiti ebe 2, 5000 ebe ọ dị oge 0,1575 km na ọ bụ otu ahụ Eratotenes si nweta gburugburu ụwa ma ọ bụ ihe ruru oke ...
Zaghachi Christian Severo chantes
Emehiela. Ọ bụghị dayameta nke ruru kilomita 40.000. Ọ bụ okirikiri gburugburu ụwa jikọrọ ọnụ.
acha anụnụ anụnụ Ọnwa